बालुवाटारमा विघटित कार्यदलका सदस्यको भेला ! जनार्दन शर्मा भन्छन्–मलाई थाहा छैन | बालुवाटारमा विघटित कार्यदलका सदस्यको भेला ! जनार्दन शर्मा भन्छन्–मलाई थाहा छैन |
बालुवाटारमा विघटित कार्यदलका सदस्यको भेला ! जनार्दन शर्मा भन्छन्–मलाई थाहा छैन
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद समाधानका लागि विघटित कार्यदलका सदस्यहरु बालुवाटार पुुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विवाद समाधानका लागि गत ३० साउनमा बनेको कार्यदललाई बालुवाटार बोलाएका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... बलात्कार गरेको अभियेगमा काँग्रेस नेता पक्राउ
नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड दुुइपक्षिय छलफलमा छन् । यसअघि स्थायी कमिटीमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि उक्त कार्यदल बनेको थियो ।
यही कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको थियो । कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या र नेताहरुको आ–आफ्नै बुझाइ भएपछि थप छलफलका लागि बोलाइएको बालुवाटार निकट स्रोतले बताएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... काम गरेर ‘सेलिब्रेटी’ बन्ने अवसर आउँदा पनि दिन प्रतिदिन चुक्दै स्वास्थ्यमन्त्री
महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलका सदस्यहरुमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल र पम्फा भुसाल छन् ।
तर, कार्यदलका सदस्य समेत रहेका जनार्दन शर्मा भने बालुवाटारमा भएको छलफलबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । उज्यालो नेटवर्कसँगको कुराकानीका क्रममा शर्माले भने, ‘बालुवाटारमा बैठक बसेकोबारेम थाहा छैन मलाई । म त बिरामी भएर घरमा सुतिरहेको छु ।’
यो पनि पढ्नुहोस् ... एक्सनमा एसपी प्रवीण पोखरेल, पेस्तोलदेखि अवैध लागू औषधसम्म बरामद